गुगल द्वारा दैनिक 400 मिलियन टर्मिनलहरू स्क्यान गरिन्छ Androidsis
गुगलसँग छ वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशित भयो जसमा उसले एन्ड्रोइड उपकरणबाट सुरक्षा सुधारको बारेमा रिपोर्ट गर्दछ। यस रिपोर्टबाट, मालवेयर वा टर्मिनलको "स्वास्थ्य" लाई खतरामा पार्ने अन्य समस्याहरूको खोजीमा दैनिक स्क्यान गर्नु पर्ने अनुप्रयोगहरूको संख्या अत्यन्तै बाहिर खडा हुन्छ।
माउन्टेन भ्यू-आधारित कम्पनी दैनिक स्क्यान गर्दछ Billion अरब अनुप्रयोगहरू स्थापना गरियो र million०० मिलियन उपकरणहरू। यो पनि अत्यन्त उल्लेखनीय बीचमा टिप्पणी गर्दछ, करोडौं क्रोम प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षित ब्राउजिंग मार्फत दैनिक सुरक्षा गर्छन् जब उनीहरू शंकास्पद मूलको वेबसाइटहरूमा प्रवेश गर्छन्।
अघिल्लो वर्षको तुलनाको बारेमा, प्राप्त गर्न सकिन्छ कि छवि लगभग समान छ। गुगलले यसलाई कायम गर्दछ कि २०१ 2016 को पाठ्यक्रमको दौरान, पीएचएहरू, वा "सम्भावित हानिकारक अनुप्रयोगहरू" भनेर चिनिन्थ्यो, सामान्यतया गुगल प्लेमा प्रवेश गर्ने ०. 0,15 प्रतिशत भन्दा कम उपकरणमा स्थापना गरिएको थियो। यदि तपाईं एन्ड्रोइड इकोसिस्टममा सबै उपकरणहरू समावेश गर्नुहुन्छ जुन गुगल सेवाहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै अन्य स्टोरहरूबाट तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू द्वारा प्राप्त गरिएको, आंकडा ०. 0,5 प्रतिशतमा पुग्छ। पहिले नै गत वर्ष गुगल आफैंले त्यो आंकडा एक प्रतिशत भन्दा कम थियो कि बनाए।
माउन्टेन व्यूबाट ती द्वारा जारी गरिएको नयाँ रिपोर्टमा, नयाँ सुरक्षा अतिरिक्तहरू हाइलाइट गर्नुहोस् जुन अनुप्रयोग अनुमतिहरू र पूर्ण डिस्क ईन्क्रिप्शन जस्ता थप गरिएको छ प्राय जसो मार्शमेलो उपकरणहरूको लागि आवश्यकताको रूपमा। एन्ड्रोइडले बग बाउन्टी शिकारीहरूको लागि गुगलको बाउंटी प्रोग्राममा पनि भाग लिएको छ र भनिएको छ कि यसले १०० जोखिमहरू स्थिर गरिसकेका छन जुन "समाधानकर्ताहरू" लाई ,100 २००,००० को भुक्तानीको साथ यस समाधान मार्फत रिपोर्ट गरिएको थियो।
ती उपायहरू अर्को हुन् मार्समैलो सुरक्षा प्याचहरू जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको उपकरणको स्थितिको बारेमा सूचित गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » सुरक्षा » गुगलले मालवेयरका लागि दैनिक billion अरब एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू स्क्यान गर्दछ